Muxuu had iyo jeer jabaa fiilada iPhone? | Waxaan ka socdaa mac
Dhamaanteen ayey nagu dhacday. Waa wax goor dhow ama goor dambe dhaca. Fiilooyinka hillaaca ee iPhone-keena ama iPad-ka ayaa dillaaca. Had iyo jeerna hal xagjir ah. Run maahan?. Cillad weyn oo soo wajahday badeecadaha aan asalka ahayn ee Apple waa tayada hoose ee fiiladan. Dhowr maalmood ka dib ogaanshaha taariikhda khudradda xigta ee Apple oo ay ku soo bandhigi doonaan kun iyo hal war, miyay iloobeen fiilada mar labaad?
Tan iyo jiilkii ugu horreeyay ee iPhone fiilada xad-dhaafka ah ayaa xumaatay. Tayo xumo iyo iska caabin xun. Way cadahay in markay tahay keydinta fiilooyinkayaga markasta sida ugu wanaagsan ugama qabanno. Waxay yihiin fiilooyin maalin walba tabaa. Waxaan u isticmaalnaa maalin kasta, iyo mararka qaarkood in ka badan hal jeer. Ka dibna waxaan u rogeynaa kun iyo hal waddo. Tani cudurdaar ma ku filan tahay?
1 Ma jiri doonaan wax horumar ah oo ku saabsan fiilada danabka ee iPhone 7?
2 Xeryaha lagu iibsado qalabka aan asalka ahayn, ha iibsan kuwa ugu jaban.
Ma jiri doonaan wax horumar ah oo ku saabsan fiilada danabka ee iPhone 7?
Iyadoo la tixgelinayo qiimaha iPhone-ka, qalabka ugu aasaasiga ah uguna faa'iido badan hawsha kuma xirna. Waligeedna may noqon. Waxaa jira qaaciidooyin iyo xeelado aan la soo koobi karin oo khadka tooska ah ka sameeya si uusan xariggu u jabin. Ku xoojinta dhamaadka cajalad koronto, gelinta qalin guga si ay u siiso dabacsanaan badan… Ragga ku jira Cupertino waa inay ka xishoodaan.
Waxaan marwalba difaacnay in adeegsiga aaladaha aan asalka ahayn ay dhaawici karaan qalabkeena. Iyo in maalgashi muhiim ah aan ku sameynay taleefan casri ah oo tayo leh, yaanan iibsan qalabka "Shiinaha". Laakiin waa cimri dhererka danabka, iyo kuwii kahoreeyay, waa maxay wuxuu dhiirigelinayaa iib ballaaran oo ah alaab aan asal ahayn.
Sida dhammaan alaabada tufaaxa, fiiladu sidoo kale ma ahan mid rakhiis ah. Caadiga ah hillaaca ku soo dhaca sanduuqa Iphone-ka ayaa qiimihiisu yahay 20 euro, oo cabirkiisu yahay hal mitir. Waxa kale oo jira laba mitir oo qiyaastii ah 25 euro. In kasta oo aysan u muuqan wax qaali ah, markii aad iibsato labo ka mid ah sanadkii waxay durba u muuqataa. Iyo xitaa inbadan oo taas og wixii ku kacaya mid asal ah, waxaan ku iibsan karnaa ficil ahaan labaatan aan asal ahayn. Laakiin waa inaad ogaataa in marka la eego qalabka aan asalka ahayn ay jiraan heerar kala duwan.
Sidaa darteed, markaad iibsanayso xeedho aan ahayn Apple, waxaan kugula talin karnaa inaadan iibsan midka ugu jaban. Ama ugu yaraan taasi waxay la kulantaa ugu yaraan tayo. Ogow taas ka raqiisan yahay, ayaa ka sii xumaanaya qalabkaagu. Iyo ka raqiis ahaanta, waxaan u baahan doonnaa inay ku soo dallacdo aaladda ugu yaraan. Laakiin waxaa dhici karta inaysan culeys saarin, oo ay si xamuul ah u rarto, iyo xitaa ha u ogolaano taleefankeena casriga ah "lacag".
Xeryaha lagu iibsado qalabka aan asalka ahayn, ha iibsan kuwa ugu jaban.
Halista ugu weyn ee xanta iyo wararka nagu habsanaya marka aan ku wajahanno Muhiimka, ma jiro wax dhawaq cusub oo arrintan la xiriira. Way cadahay inaan dhamaanteed ka rabno iPhone 7. Kaamirada ugu fiican, processor ka fiican, xusuusta badan, awood badan. Laakiin ma iloobi karno mar labaad fiilada liidata. Hillaacii wali waa la ilaaway. Kordhinta ka dib hagaajinta iPhone-ka wuxuu ku badbaadaa sida ugu fiican ee uu awoodo.
Si kastaba ha noqotee, marka la eego Apple waxaan dhihi karnaa wax wanaagsan. Ilaa iyo inta taleefanka uu ku jiro dammaanad, waxay si otomaatig ah u beddelayaan fiilada. Laakiin tani ma ku filan tahay?. Annagu ma rumaysanno. Sanadkii 2009, dacwad ayaa laga furay Mareykanka oo ka dhan ah Apple sababo la xiriira fiilooyinka. Waxaa kiiskan ku keenay danjireyaasha 'MacBook'. Dacwadaas waxaa lagu dooday inay khatar yihiin, Apple-na waxaa lagu eedeeyay inuu ogaa oo uusan joojin soosaariddooda. Ugu dambeyntiina, heshiis maxkamad ka baxsan ayaa la gaaray si loo beddelo ama loo soo celiyo lacagta loogu talagalay xeedho-qaateyaasha dhaawacmay.
Si kasta oo ay tahay Apple ma qiran in ay qaladaad ka sameeyeen soo saaristeeda. Ama in badeecada ay iibiyeen ay cilad ahayd. Xilligan la joogo kama war qabno cabashooyinka cusub ee ku saabsan isku xiraha danabka. Laakiin waxaan meesha ka saareynin inay dhacdo goor dhow ama goor dambe. Dhowr maalmood ilaa nuxurka soo socda ee Apple ma lumineyno rajo. Waxaan rajeyneynaa in qof ka tirsan Cupertino uu ka fikiray arrintan, oo ay nagula yaabi doonaan isku xira ku nool calaamadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Muxuu had iyo jeer jabaa fiilada iPhone-ku?